Ny DNA (deoxyribonucleic acid) dia karazana macromolecule fantatra amin'ny hoe asidra nokleika . Izy io dia miendrika toy ny helix avo roa heny ary misy lavaka lavitr'ireo sikara miovaova sy ny phosphate, miaraka amin'ny fototra azoto (adenine, thymine, guanine sy cytosine). Ny ADN dia voalamina amin'ny rafitra antsoina hoe chromosomes ary mitoetra ao anatin'ny efitranon'ny sela. Ny ADN dia hita ao amin'ny cell mitochondria .
Ny DNA dia mirakitra ny fanazavana ara-tsiansa ilaina amin'ny famokarana sela, organelles , ary ny fananganana fiainana. Ny famokarana proteinina dia dingana tena ilaina amin'ny sela izay miankina amin'ny ADN. Ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny code genetique dia avy amina ADN amin'ny ARN amin'ny proteinina vokarin'ny proteinina .
Ny ADN dia fitambaran-tsiranoka matevina sy phosphate ary base. Ao anaty ADN mifamahofaho dia miakatra ny tahony azota. Adenine dia mitambatra amin'ny thymine (AT) sy guanine pairs amin'ny cytosine ( GC) . Ny endriky ny ADN dia mitovy amin'ny tohatra iray. Ao amin'io endritsoritra roa io, ny sisin'ny tohatra dia miforona amin'ny alàlan'ny molekiola deoxyribose sy ny molekiolan'ny phosphate. Ny dingana fitsangatsanganana dia mifototra amin'ny toetry ny azota.
Ny ADN amin'ny helikoptera simban'ny ADN dia manampy amin'ny fanaovana io molecule biolojika io. Ny ADN dia tsindriana ao anaty rafitra antsoina hoe chromatin mba hahafahany mitambatra ao anatin'ny taokanto.
Ny Chromatin dia misy ADN izay mirakitra proteinina madinika antsoina hoe histones . Ny histôn dia manampy amin'ny fikarakarana ADN ho rafitra antsoina hoe nucleosomes, izay mamorona fibre chromatin. Ny fibre chromatin dia mihosotra sy mihalefy amin'ny chromosomes .
Ny ADN amin'ny helikoptera roa dia mahatonga ny ADN ho azo atao.
Ao amin'ny replication, ADN dia manome kopia ny tenany mba handefasana fanazavana ara-piterahana momba ireo sela vavimatoa vaovao. Mba hahitana ny replication dia tsy maintsy miala amin'ny ADN ny ADN mba hamela ny fitaovana fitanterana finday handikana ny kofehy tsirairay. Ny molecule tsirairay avy dia mamorona ny tadin'ny molekilan'ny ADN tany am-boalohany ary ny endriny vaovao. Ny famerimberenana dia mamokatra molekiolan'ny DNA ao amin'ny sela. Ny famakiana ADN dia miseho eo anelanelany , dingana iray alohan'ny hanombohan'ny fizarana fizarana ny mitosis sy meiosis.
Ny dikan-tenin'ny DNA dia dingan'ny angona proteinina. Ny sintomin'ny ADN izay antsoina hoe genes dia mirakitra ny fizika na kôdeksa ho an'ny famokarana proteinina. Mba hahazoana fandikan-teny dia tsy maintsy miala aloha ny ADN ary mamela ny firaketana ny ADN . Ao amin'ny transkripsyon, ny ADN dia azo adika ary misy famandrihana RNA an'ny ADN (sarin'ny RNA). Miaraka amin'ny fanampian'ny sela ribosome sy ny famindrana RNA, ny fandikana RNA dia mandika ny fandikan-teny sy ny proteinina.
Ny fiovana rehetra eo amin'ny fizotry ny nucleotide ao amin'ny ADN dia fantatra amin'ny anarana hoe mutation . Ireo fiovana ireo dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny paositry ny nucleotide tokana na faritra lehibe kokoa amin'ny chromosome. Ny fiovan'ny Gene dia vokatry ny otrikaretina toy ny zavatra simika na ny taratra, ary mety ho vokatry ny fahadisoana natao nandritra ny fizarana sela.
Ny famolavolana ny ADN dia fomba lehibe hianarana momba ny firafitry ny ADN, ny asa ary ny replication. Azonao atao ny mianatra ny fomba fanaovana modely ADN amin'ny kitapo, ny firavaka, ary na dia ny mianatra ny fomba fanaovana modely amin'ny ADN mampiasa vatokely .
Mianara momba ny karazana ra
Voafandrika ve ny Volonao?
Ahoana no nahalalana ny aretina?
Nahoana ny vehivavy no mipetraka lavitra noho ny lehilahy?
Gene sy Genova
Ny Lalàn'ny Segregasionan'i Mendel
Perl Array Pop ()
Ny arikanjon'ireo tari-dalana efatra: Uriel, Michael, Raphael, Gabriel
Karazana Piton: Mpamboly Mampiasa Mavomavo ho an'ny Fanamboarana Faharoa
Sarin'ny asa vita amin'ny Decimals
Fahaleovan-tena na andro nahaterahana ho an'ny firenena tsirairay
Azonao Atao Amin'ny Internet ve ny Fitsapana GED?
Famaritana ny fandikan-teny samihafa ary ohatra
Amber ho fitaovana fanasitranana
Tantara an'ny PC IBM
Ady tany Indônia: ady tao Dien Bien Phu
Mozika Piano ho an'ny "Adeste Fideles"
Ny Kristianina, mpanompo sampy, na fiaraha-mivavaka tsy ara-dalàna amin'ny Halloween
Fitaovana enti-manendry fitaovana mozika
Ahoana no hamantarana ireo hazo avaratra any Amerika avaratra
John Quincy Adams: Fomba manan-danja sy bitsika mivantana
Tokony Haka ny SAT sy ny ACT ve Ianao?
Ohatra tsy ampy amin'ny teny feroianina
Iza moa ilay mpanjakavavin'i Sheba?